The Domino Project: Tụkwasị Onwe Gị Aka ingde Ihe | Martech Zone
Tuesday, May 31, 2011 Sunday, October 4, 2015 Jenn Lisak Golding
Dị ka onye ofufe nke Ọrụ Domino, M ga-ekere òkè na Tụkwasị Obi Onwe Gị Aka, nke bụ “ihe ị na-achọ n’ onlinentanet na ihe ịma aka ụbọchị 30 nke ide ihe na-agba gị ume ileba anya n’ime onwe gị ma tụkwasị onwe gị obi.” Kwa ubochi, aga m enweta ngwa-ngwa site na email, nke m nwere ike biputere na blọọgụ m, dee na akwụkwọ akụkọ m, wdg. Na ụwa nke ịde blọgụ, anyị na-atụfu onwe anyị mgbe ụfọdụ na ụdị ndị anyị na-anwa ire kwa ụbọchị. Echere m na ọrụ a bụ nnukwu ụzọ iji banye n'ime ederede na ịde blọgụ nke ga-eme ka nkà ịde blọgụ nke ụlọ ọrụ.
Malite taa, bido ide edemede ma ọ bụ edemede site na isoro ndị a ngwa ngwa nyere site dị iche iche ndị edemede tinyere ọrụ a. Soro anyi na nsogbu a, ma nweere onwe gi isoro anyi kesara ihe gi!